Azịza kachasị mma: Kedu ka ị si egosi nkwanye ùgwù na Vietnam? - zuru ike na mba ndị na-ekpo ọkụ
Azịza kachasị mma: Kedu ka ị si egosi nkwanye ùgwù na Vietnam?
Kedu otu esi egosi nkwanye ugwu na omenala Vietnamese?
Kedu ihe a na-ewere na ọ dị mma na omenala Vietnamese?
Kedu ihe a na-ewere dị ka enweghị nkwanye ùgwù na Vietnam?
Kedu ihe bụ ụkpụrụ Vietnam?
Kedu ihe m ga-ezere na Vietnam?
Kedu ihe bụ ezigbo onyinye maka nwanyị Vietnamese?
Ọ bụ mkparị ịhapụ nri na Vietnam?
Gịnị mere Vietnamese ji agba ụkwụ efu?
Ndị Vietnamese n'ozuzu na-amanye aka ma mgbe ha na-ekele ma mgbe ha na-asị nke ọma. Jiri aka abụọ maa jijiji, ma rutuo isi gị ntakịrị iji gosi nkwanye ùgwù. kpọọ isiala nye ndị agadi na-adịghị esetị aka ha. Ụmụ nwanyị Vietnam na-enwekarị mmasị irutu isi ha ntakịrị karịa ịkwanye aka.
Jiri mkpịsị aka pinkị tụọ aka
Yiri ọtụtụ ebe, ọ bụ mkparị iji mkpịsị aka gị tụọ aka na Vietnam. Iji nwee nkwanye ùgwù, jiri mkpịsị aka pinky gị mgbe ịchọrọ ịtụ aka n'ihe. Iji aka mepere emepe tụọ aka, nkwụ chere ihu n'ala, na-adịkwa mma karịa, mana ọ dị ntakịrị karịa ọtụtụ ọnọdụ.
A na-ewere ikwu okwu n'olu dara ụda na mmegharị ahụ dị oke egwu, ọkachasị mgbe ụmụ nwanyị na-eme ya. Iji gosi nkwanye ùgwù, ndị Vietnam na-ehulata isi ha anaghị ele onye ka elu ma ọ bụ okenye anya na anya. Iji zere esemokwu ma ọ bụ enweghị nkwanye ùgwù. ọtụtụ ndị agaghị ekwupụta esemokwu. Naanị uwe mwụda kwesịrị iyi n'akụkụ osimiri.
Ụkpụrụ ọdịnala ọdịnala Vietnam gụnyere: ịhụ mba n'anya, ịdabere n'onwe ga, ịdị n'otu, obiọma, ndidi, ịhụnanya, ịdị uchu, ịrụsi ọrụ ike, nchekwube.. Ụkpụrụ ndị a abụghị nanị na-ekere òkè dị ukwuu na nlanarị kamakwa na-akwado ike siri ike nke mba ahụ n'oge gara aga, ugbu a na n'ọdịnihu.
Nke a dị mkpa: Ndị mba ọzọ nwere ike ịlụ di na nwunye na Philippines?
Otú ọ dị, e nwere ihe ụfọdụ a na-ezere nke ọma.
Mgbata mmiri. Enwere ike malite na nke doro anya. …
Anụ anụ. Anyị apụtaghị anụ n'okporo ámá, dị ka nri okporo ámá na Vietnam dị ịtụnanya. …
Kọfị n'akụkụ okporo ụzọ. …
Akwụkwọ nri anaghị esi nri. …
Pudding ọbara dị ala. …
Ofe oyi. …
Nkịta anụ. …
Onyinye kacha elu 10+ maka enyi nwanyị Vietnamese n'ụbọchị Valentine
Chocolate. Ọ dịghị mkpa ide ọtụtụ ihe banyere chọkọletị n'ihi na ha bụ onyinye kacha elu n'ụbọchị Valentine. …
Roses na okooko osisi ndị ọzọ. …
Tiketi ihe nkiri. …
Akwụkwọ ego. …
Anụmanụ juru n'ọnụ. …
na a na-ewere ya dị ka enweghị mmasị ma ọ bụrụ na ị pụọ na tebụl mgbe ndị ọzọ richara nri. Gosi nkwanye ùgwù gị site n'ịgwa ha okwu ma ọ bụ nyere aka na-enye ihe eji megharịa ọnụ ma ọ bụrụ na i richara nri. Ụdị nri Vietnamese yiri obodo Eshia ndị ọzọ.
Dị ka usoro isi, Ndị Vietnamese na-eyipụ akpụkpọ ụkwụ ha mgbe ha lọtara ụlọ ma ọ bụ banye n'ụlọ ndị ọzọ. Isi mmalite nke ọdịnala a mara mma amabeghị. … Ịweta akpụkpọ ụkwụ n'ime ụlọ dị na Vietnam bụ, ya mere, ụfọdụ ndị mmadụ, dị ka iweta ihe ruru unyi, na-ebute chi ọma n'ime ụlọ.
Ee. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere a solo Singapore njem, ị nwere ike họrọ a
Dama bụ egwuregwu a na-eme n'ọwụli elu na Philippines. N'ime ya, a
Ego ole bụ ụgwọ maka ibu ngafe maka ụgbọ elu Philippine?
Kedu ka ọrụ ugbo dị na Thailand?
Ego ole INR ka m nwere ike iburu na Singapore?
Onye nwe Okada Manila?
Ajụjụ: Kedu ka m ga-esi kpọọ nọmba US si Malaysia?
Ajụjụ: Gịnị kpatara Malaysia ji dị iche na Indonesia?
Ebee ka Manila Water na-enweta mmiri ya?